Mpanorina ARM: Graphcore tohanan'ny Microsoft manohitra ny fahazoan'i Nvidia ARM - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Mpanorina ARM: Graphcore tohanan'ny Microsoft manohitra ny fahazoan'i Nvidia ARM
Mpanorina ARM: Graphcore tohanan'ny Microsoft manohitra ny fahazoan'i Nvidia ARM
Ny mpikambana fototra iray ao amin'ny ARM Holdings dia nanambara vao haingana fa talohan'ny nividianan'i Nvidia ilay mpanamboatra puce britanika tamin'ny $ 40 miliara dia naneho fanoherana mahery vaika ny Graphcore, izay tohanan'ny Microsoft. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny CNBC, Hermann Hauser (Hermann Hauser), izay nanampy tamin'ny fahitana ARM tamin'ny taona 1990, dia nanambara fa nanohitra ny fifampiraharahana i "Graphcore" tamin'ny "hevi-dehibe" natolotra ny Fifaninanana UK sy ny Fahefan'ny tsena.
Hauser dia nilaza hoe: "Raha i Nvidia dia afaka manambatra ny volavolan'ny ARM sy Nvidia amin'ny rindrambaiko iray ihany, dia midika izany fa ny orinasa toa an'i Graphcore dia voahidy ao amin'ny tsenan'ny mpivarotra ary mamorona fifandraisana akaiky amin'ny ARM." Amin'ny alàlan'ny orinasam-pandraharahana an'i Hauser, Amadeus Capital, dia iray amin'ireo mpamatsy vola lehibe an'i Graphcore.
Nvidia dia mikasa ny hahazo ARM avy amin'ilay rindrambaiko Japoney goavambe SoftBank, mpitondra tenin'ny orinasa iray tamin'ny Alarobia namaritra ny fifampiraharahana ho "fifaninanana manohana." Ny ARM dia tsy namaly avy hatrany ny fangatahan'ny CNBC hevitra. Tsy nety naneho hevitra i Graphcore sy CMA. Na izany aza, nilaza tamin'ny CNBC ny CEO CEO Graphcore Nigel Toon tamin'ny volana desambra fa mino i Graphcore fa fanoherana fifaninanana izany fifanarahana izany.